I-OMG Industrial Borescope / i-Endoscope 5.5mm, Isikrini se-4.3inch, 2800mAh Ibhetri yeSemi-Rigid Tube (3.5m / 5m) [END015] | Izisombululo ze-OMG
I-OMG Industrial Borescope / i-Endoscope 5.5mm, isikrini se-4.3inch, i-2800mAh ibhetri yeSemi-Rigid Tube (3.5m / 5m) [END015]
Isikrini se-4.3inch HD: Ikhamera yescreen ye-4.3inch LCD, yenza ukubonwa kwevidiyo kunye neefoto ngoko nangoko. Akukho fakelo lwe-APP olufunekayo.
I-16.5ft semi-rigid tube yanele ngokwaneleyo ukubamba imilo yovavanyo oluninzi.
Ikhamera ebonakalayo ye-5.5mm: Iprojekthi yekhamera ye-5.5mm (0.21) inceda ukufikelela nakweyiphi na indawo evalekileyo, enjini yedizili, iilokhi zombhobho, injini yemoto, isilinda, umjelo womjelo womjelo njl.
Ibhetri enkulu enokuhlawuleka ibhetri: Yakhelwe ibhetri ye-lithium ye-2800mAh enomthamo omkhulu, ikhamera yokuvavanya i-NIDAGE endrosope inokunikela iiyure ezili-3-4 zexesha lokusebenza okuqhubekayo.
Izixhobo Zokuhlola Ezininzi: Ikhamera ye-microscope ilungile kuhlolo lwe-havc, kumbhobho wokungena, izixhobo zomatshini, injini, iimoto, isikhephe, ukuhlolwa kwenqwelomoya. I-endbop ye-usb ayenzelwanga ukuba ihlolwe kwezonyango okanye zobuqu.
Ukupakisha kuqukiwe: Iikhamera ze-endoscope zecandelo, iMicrosoft-USB Cable, iNqaku loMsebenzisi, iiHack yilelo lokulinganisa, umazibuthe kunye nesibuko esecaleni sokukhetha kunye ne-angle ebanzi yokujonga, i-4.3inch Endoscope Monitor, iKhadi le-XF le-8GB ye-TF, ibhegi yokuthwala.
Iimpawu ezizodwa: Wi-aterproof / Weatherproof
Ukujonga: Iscreen semibala ye-4.3inch Screen LCD
Bonisa: I-500cd / ㎡
Ukufakwa kwemifanekiso: 1920 × 1080,1280 × 720,
Ukujikeleza: I-360 ° Ukujikeleza ngeMircy
ubukhulu: 5.5mm (0.216inch)
Inkcaso Ubude: 3.5M / 5M
Ukujonga iNgqungquthela: 60 °
Ubunzulu beNkundla: I-3 ~ 10cm
5887 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-1 Namhlanje